पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् : ज्ञवाली - Janadesh Khabar
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो । भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाका निजी आवास, सांस्कृतिक धरोहर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक र खानेपानी संरचनालगायत पुनर्निर्माणको चुनौती प्राधिकरणसँग थियो ।
प्रस्तुत छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा प्राधिकरण स्थापनापछि लामो समय प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश
ग्रामीण क्षेत्रको पुनर्निर्माणले गति लिए पनि शहरी क्षेत्रमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो रु यसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले के गरेको छ ?
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा ढिला भइरहेको पुनर्निर्माण छिटो गर्न दक्ष निर्माणकर्मी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार परिचालन गरिएको छ । समस्या के हो त्यो ल्याएर समाधानमा सहयोग गर्न सामाजिक परिचालकले सहयोग गर्छन् ।
शहरी क्षेत्रमा थोरै जग्गामा बनेका घरमा भाइभाइको आन्तरिक समस्या छ । त्यो समस्या प्राधिकरणले समाधान गर्न सक्दैन । बहुस्वामित्वले पनि शहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । बहु स्वामित्वसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
पुनर्निर्माणमा दाताले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग शतप्रतिशत प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा रु ९ सय ३८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । गत वर्षदेखि धेरै रकम कोरोना भाइरसको उपचार आदिमा खर्च भएको छ । पछिल्लो समय विद्यालय, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा आवश्यक स्रोत प्राप्त हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ रु यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
बेला बेलामा हुने नेतृत्व परिवर्तनबीच यहाँले लामो समय प्राधिकरण हाँक्नुभयो रु त्यसबीचमा कस्ता कस्ता अनुभव प्राप्त भए ?
११ पुस २०७७, शनिवार १६:०६ बजे प्रकाशित
काठमाडौं महानगरपालिकालाई अभियन्ताहरुले घेर्दै
मंगलबार सुनको भाउ ४०० रुपैयाँले बढ्यो
हेर्नुहोस् विदेशी मुद्राको आजको विनिमयदर